असफलतालाई सफल पार्ने कसरी ?
इण्डोनेसियामा सुनामी आयो, धनजनको क्षति भयो । नेपालले समवेदन प्रकट गर्नुपर्नेमा बधाई पठायो भन्ने प्रकरणले ओली सरकारको व्यापक बदनाम गरियो । यद्यपि परराष्ट्रको वेभसाइटमा समवेदना छ, प्रेसलाई पठाएको वक्तव्यमा बधाई छ, यो कसरी भयो ? कसको गल्तीले भयो, सकारलाई जसरी पनि असफल पार्न कर्मचारीतन्त्र लागेको त होइन ? यो त मुलुकको पनि बदनामी हो, विचार गर्न जरुरी छ ।
सामाजिक सञ्जालभरि ओली सरकारको आलोचना भइरहेको छ । अमेरिका पुगेर फर्केपछि इण्डो प्यासेफिक रणनीतिमा नेपाल संलग्न छैन भन्न सक्ने परराष्ट्रमन्त्रीले कन्डोलेन्स दिनुपर्नेमा कन्ग्राजुलेसन कसरी पठाए भनेर प्रष्टिकरण दिनुपर्छ कि पर्दैन ? यसमा परराष्ट्रले क्षमा मा“गेको कुरा कसरी आयो ? प्रधानमन्त्रीको ध्यान जानुपर्छ ।
एकातिर नेपाललाई इन्डो प्यासेफिक रणनीतिमा सेन्टर रोलमा राखेको अमेरिकी वक्तव्यले नेपाल–चीन सम्बन्धमा चिसो पार्ने काम भइरहेको छ, त्यसमाथि इण्डोनेसियालाई खाइस् भन्ने पाराले समाचार आउ“दा सरकार मौन बस्नु साह्रै नरमाइलो बिषय हो । संवेदनहीन कामले ओलीजस्ता खरा नेताको बदनाम भइरहेछ ।
छानबिन हुनुपछ । न नेपालको परराष्ट्रनीतिमा विचलन आउनु हुन्छ, न त नेपाल संवेदनहीन छ भन्ने नै देखिनु हुन्छ । नेपाल जिम्मेवार सार्वभौम मुलुक हो, यो जिम्मेवारी बखुवी निर्वाह गर्नुपर्छ । दुई तिहाइको सरकारको बदनाम गरेर यो सरकारलाई असफल पार्न पार्टीभित्र र बाहिर जेजस्तो षडयन्त्रहरु भइरहेका छन्, त्यसलाई चिर्न अव प्रधानमन्त्री स्वयम् सक्रिय हुन जरुरी देखिन्छ । यो सरकार पनि असफल हुन्छ भने नेपालको स्थिरता र विकास असम्भव हुनेछ । यो गम्भीर विषय हो ।
हो, ओली सरकार कानुन व्यवस्थामा कमजोर देखिएकै हो । देशभरिका आमासमूह बालिका बलात्कार र हत्यामा आक्रोसित छन् । ओली सरकार राज्य सञ्चालनमा पनि कमजोर देखिएकै हो, नेपाल एयरलाइन्सको जहाज खरिददेखि सुनकाण्डसम्मका कुरा जनतालँई भन्न सकेको देखिदैन । कतिपय नियुक्तीमा पनि ओली सरकार नेताकरण भएकै हो, त्यस्तो देखिनु हुन्न । ओली सरकार राष्ट्रिय सरकार हो, यसले विभेद र निषेध राख्नु भनेको संविधान असफल भयो भन्ने अर्थमा समेत देखिन्छ, त्यसै पनि प्रतिपक्षी अधिनायक लाद्यो भनिरहेका छन् । यसकारण तमाम नेकपाका थिङ्क टेङ्कले, मन्त्री प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिका सल्लाहकारहरुले सही सुझाव दिनुप¥यो, गल्ती करेक्शन गरेर सरकारलाई सफल पार्दै सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल बनाउने कटिवद्धता देखाउनु प¥यो । अन्यथा नेकपाको सरकार असफल हुनेछ, देश असफल हुनेछ, संविधान असफल हुनेछ । अन्ततः लोकतन्त्र असफल हुनेछ, चेतना होस् ।